Arooska amiiradda Madeleine ee sabtida oo si weyn loo sugayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Arooska amiiradda Madeleine ee sabtida oo si weyn loo sugayo
La daabacay fredag 7 juni 2013 kl 10.12
Amiiradda Madeleine iyo saygeeda cusub Christopher O'Neill. Sawirle: Jonas Ekströmer/Scanpix
Waxaa Iswiidhen ka jira xiiso ballaaran oo la qabo arooska maalinta sabtida dhexmari doona amiiradda Isiwiidhen Madeleine iyo ninka maraykanka ah loo magacaabo Christopher O’Neill, arooskaas oo lagu qaban doono kaniisadda qasriga boqortooyada ee Slottskyrkan oo ku taal bartamaha Stockholm. Xafladda arooskaan oo isugu jiri doonta damaashaad iyo lammaanaha oo magaalada ku dhexwareegi doonaa iyagoo saaran gaari fardo jiidayaan, taas oo si toos looga la socon doono idaacadaha telefishanka. Waxaa telefishanka laga soo deyn doonaa saacaddu kolka ay tahay 8:15 subaxnimo waraysiyo lala yeelan doono Daniel Nyhlén oo ah weriyaha aqalka boqortooyada iyo Catarina Hurtig oo khabiir ku ah arrimaha boqortooyada.
Waxaa arooska lagu casumay marti gaareysa 400 oo qof. Xafladda arroosku waxay bilaaneysaa jimcaha fiidkii oo ay boqorka iyo boqoraddu casumaad ugu samayn doonaan hoteelka Grand Hotel dadka marti-sharafta ah. Meherkuna wuxuu dhacayaa maalinta sabtida marka ay saacaddu tahay 4 galabnimo ka hor inta marti-sharaftu u dareerin cashada lagu qabanayo qasriga boqorka ee Drottningholm. Waxaa iyadguna arooskaan dartiis Stockholm ku soo qulqulaya dad farabadan oo ka kala imaanaya dunida daafaheeda si ay goobjoog uga noqdaan dhacdadaan.
Waxaase wakhtiyadii sambe soo xoogeysanayey dheleeceyn ku saabsan in arooskaan gabadha amiiradda ah oo aan inta badan Iswiidhen joogin laga dhigay arrin qaran. Waxaa isla maalinta sabtida saacadda 7:22 waraysi arrintaa laga la yeelanayaa Hillevi Larsson oo horay hoggaamiye u ahayd ururka jamhuuriyadda oo ah urur u dooda in Iswiidhen laga dhigo jamhuuriyad iyo Cecilia Magnusson oo ah guddoomiye ku xigeenka labaad ee ururka boqortooyada oo isna u dooda in Iswiidhen ay ahaato boqortooyo.